150 * 90cm Fotsy matevina Vinyl lehibe ho an'ny rindrina China Manufacturer
Home > Products > Whiteboards Receptive Whiteboards > Fampitaovana mivadika ho fotsy > 150 * 90cm Fotsy matevina Vinyl lehibe ho an&#39;ny rindrina
Ny haben'ity vokatra ity dia 1500mm * 900mm Self-ankavanana Whiteboard dia karazana whiteboard mora ampiasaina miaraka amin'ny adhesive, mora tapaka, boribory, tenda, vilia, na mety vita amin'ny endriny rehetra. Mitahiry toerana ary mora entina . Ny taratasy mivalona fotsy dia mora apetraka ary tsy hianjera mora noho ny haingany matanjaka . Amin'ny maha papetibe azy, dia misy fihenan-tena mety hanoratra sy hamafaina. Mifanaraka amin'ny penina maro karazana, marika azo esorina mandritra ny iray volana. Satria Magnetic Receptive Whiteboard Sheet vita amin'ny fifangaroana vovoka vy miaraka amin'ny plastika (CPE sns), dia manana fahaizana mandray magnetika tena tsara, magnetika azo tsidihina.
Sheet taratasy fotsy. Mifanaraka amin'ny mpanamory takela-by maina efa maina, kesika, voafafa faran'izay tsara.
Namboarina tamin'ny fampifangaroana vovoka vy miaraka amin'ny plastika (CPE sns). Izy io dia manana fahaiza-mandray mahasoa magnetika, be magnetika mifamatotra.
Tsy manana demagnetized, anti-harafesina.
Vita vita amin'ny haingam-pandriana mahery vaika, tsy tokony hianjera mora ny mofomamy amin'ny board fotsy, tsy mila mandriaka lavaka ao amin'ny anao ianao rindrina ary azo apetraka amin'ny tany malefaka toy ny latabatra, kabinetra sy ny sisa.
Premium PP, ny fanoherana ny toetr'andro, tsara ho an'ny fampiasana an-trano anatiny, misy habe lehibe azo.
Fotoana mahasoa: 20000 im-betsaka (nosedraina tamin'ny milina fanandraman-taratasy fanatanjahan-tena amin'ny alàlan'ny mari-pana sy ny hamandoana)
Ferana famafazana: Ho an'ny penina fotsy amin'ny takelaka mahazatra dia mety ho maina haingana ny marika ao anatin'ny iray volana. Raha mijanona eo am-baravarankely mandritra ny fotoana lava ny marika ary tsy afaka maina dia esorina, azafady ampiasaina ny Whiteboard Cleaner na rano misy alikaola mba hampiala azy ireo.
Bebe kokoa momba ny Whiteboard an'ny tenany manokana
Fampahalalana misimisy kokoa momba ny Whiteboard fanesorana
Bebe kokoa momba ny Magnet-back back Magnet
Manampy: Rihana 3, trano Xinglong, No.1, Shidaigang Middle, Distrikan Yuexiu, Guangzhou, Guangdong, China
Bilaogim-borona kely marevaka mora marefo
Huge Magnetic Dry Clearing Board Board Roll Up
Big Size Dry Dia Manafina White Board Cheap Price